musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Budapest Airport inowana kubatana kweNis neMweya Serbia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • Serbia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Mhepo Serbia yakazivisa kaviri-vhiki nevhiki nendege pakati Budapest Airport uye guta reSerbia reNis. Ndege dzinozoitwa kubva 1 Nyamavhuvhu neChina uye Svondo nechigaro che144-A319. Iyi ndiyo nzira yegumi nembiri kubva kuNis muS12, tichitenda muchidimbu kune mutero wemakore mashanu wePublic Service Obligation (PSO) kubva kuhurumende yeSerbia, uye wekutanga pakati peBudapest neNis.
Budapest yakaona padyo ne20% kuwedzera kwegore rega kwekubva pachigaro kugona kuSerbia muS19 zvichienzaniswa negore rapfuura, nendege nhatu - Air Serbia, Belavia neWizz Air - yava kushanda kumaguta matatu eSerbia eBelgrade, Nis (kubva 1 Nyamavhuvhu ) naPristina. 142 dzekuenda ikozvino dzakabatana neguta guru reHungary, kuvaka pamusoro pebudiriro yemakore apfuura nekumisikidza Budapest seCentral European gateway.
Nezve chiziviso ichi, Balázs Bogáts, Head of Airline Development, Budapest Airport akati: “Idzi inhau dzakanaka dzeBudapest nevatengi vedu, tichienderera mberi nekukura kwakasimba kwatakaona kusvika parizvino mwaka uno. "Iye zvino tava kupa zvigaro zvinopfuura 18,000 zhizha rino kuSerbia, chinyorwa chedu seAir Serbia neNis kupinda muzvikwata senhandare yendege neguta reBudapest."